Zombie-qaab sawir lagu qurxiyo Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sawirka qaabka Zombie oo lagu qurxiyo Adobe Photoshop
Pablo Gonder | | Sawir, Photoshop, Tababarada
Qaabka dib u hagaajinta sawirka Zombie leh Adobe Photoshop si loo abuuro muuqaal Zombie kuweena sawirro tan Hallow. U hel inaad bedesho muuqaalka sawiradaada saameyntan xiisaha leh ee dooneysa inaad abuurto qaab fudud laakiin indho qabasho iyo soo jiidasho leh adoo adeegsanaya barnaamijka muhiimka ah ee sawir qaadista.
Hel a qurxiyo digital dhammaan sawiradaada tan Hallow helitaanka sawirro hal abuur leh oo soo jiidasho leh si dhakhso leh oo caddaalad ah. Tan dhexdeeda post waxaad baran doontaa fikradaha aad muhiim ugu ah sawir guud retouching leh Photoshop.
Hallow ayaa imanaysa kulligeenna waxaan dooneynaa inaan helno sawiro aad u cabsi badan sidaa darteed ma xuma in la barto sida loo abuuro qaab dib u hagaajin sawir ah Zombie in dib loo kaydiyo dhammaan sawiradeenna tan Hallow.
Waan baran doonaa in loo isticmaalo qalabka soo socda Photoshop:
lakabyada hagaajinta (xoojinta, gooladaha, isku dheelitirka midabka)
Filter Liquefy (ikhtiyaari)
Waxaan u adeegsan doonnaa waxyaabaha soo socda hababka:
Hoos u dhig codkaagal (iyada caddeeyo)
Abuur wareegyo mugdi ah
Sawirka ka soo horjeedka
Beddel kabka midabka ka sawir
2 Maqaarka caddee
3 Abuur wareegyo mugdi ah
4 Beddel midabka sawirka
Ku fur sawirka gudaha Photoshop
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah raadi sawir yar kaas oo aan dooneyno inaan ku shaqeyno oo aan ku furno Photoshop. Marka la furo barnaamijka waxaan nuqul ka sameyn doonaa lakabka ugu weyn Inaad nuqul yeelato oo aadan taabanin sawirka asalka ah, si aad uhesho lakabka kaliya waa inaan siino badhanka saxda ah ee jiirka oo aan riixno lakabka nuqul.
para maqaarka cad sawirkayaga waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan samayno waa abuurid lakabka hagaajinta xoogga, lakabkan hagaajinta ayaa noo oggolaanaya midab u yeelo sawirka helitaanka midab cawlan oo khafiifa. Markaan abuureyno lakabkan waa inaan riixnaa xakamaynta + i toobiye awoodaan lakabka gadaal oo ku dabool saameynta kaliya meelaha aan ku rinjiga ku burushno.
Adeegso lakabka hagaajinta waa wax aad u fudud waa inaan qiyaasno taas Waa burush caadi ah oo caadi ah PhotoshopMaaddaama burush kasta uu leeyahay xulashooyin taxane ah oo ka dhigaya wax badan ama ka sii dhib yar, iyadoo ku xiran hadba waxa aan u baahanahay, waxaan u beddeleynaa cabbiraadda sida aan u jecel nahay.
Waxaan dooranaa buraashka ka dib markaan riixnay lakabka hagaajinta oo lagu daray xakamaynta toobiye + i iyo waxaan bilawnay rinjiyeynta meelahaas aan dooneyno inaan hoos ugu dhigno midabka maqaarka. Waxa caadiga ahi waa in a Zombie leeyihiin maqaar caddaan ah guud ahaan laakiin tani gebi ahaanba waa bilaash waxayna kuxirantahay qof walboo waxa uu raadinayo iyo waxa uu doonayo.
Xuduudaha in waa inaan wax ka bedelnaa markaad isticmaaleyso qalabkan waa kuwan soo socda:
Madadaalo: Waxay u oggolaaneysaa saameynta burushka inay ahaato mid aad u yar ama ka yar
Qulqulka: qaddarka wasakhda ka imanaysa buraashka
Cabbir: cabirka burushka
Adag: ka dhig cirifka wasakhda wax badan ama ka sii yaraanaya
Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali doonnaa a cadayo ugu adkaan si aad u sameyso saameynta jilicsan, gaaritaanka xaqiiqda weyn.
Waxa xiga ee aan sameyn doonno waa abuur wareegyo mugdi ah sawirka si aad u siiso muuqaal macquul ah muuqaalkeena. Si loo abuuro saameyntan waxaan abuuri doonnaa a lakabka hagaajinta gooladaha waana dhigi doonaa qaabka lakabka isku dhufo, mar dambe ayaan riixnaa ah xakamaynta + i toobiye si loo gaaro in saameynta kaliya lagu dabakho meelaha aan rabno.
Si tartiib tartiib ah iyadoo la adeegsanayo burushka waxaan rinjiyeynaynaa aagga isha sidaas awgeed lagu gaarayo saameynta wareegyada madow ee aan raadineyno. Fikradda saameyntani waa in ay jilicsan tahay sidaa darteed ay fiican tahay in la isticmaalo a ku caday mugdi iyo adkaansho hoose si tartiib tartiib ah loogu dabaqo saameynta. Haddii aan dooneyno in saameynteena ay sii muuqato, waxa aan sameyn karno ayaa ah inaan abuurno lakab kale oo isku hagaajin ah oo dib u soo celino saameynta markale
Waxaan abuuri karnaa lakabka hagaajinta curves oo aan u beddelnaa qiimaha sawirka si guud oo lagu gaaro sawirka ka soo horjeed wax yar oo dheeraad ah oo fiiri Zombie macquul ah.
Waxaan kudhowaad leenahay qaabkeena sawir qaadista Zombie waxaan awoodnaa oo keliya beddel midabka sawirka inuu ku siiyo a midab madow oo la xidhiidha noocan sawir qaadista ah. Qaybtani gabi ahaanba waa bilaash waxayna kuxirantahay midkastaaba wuxuu raadinayo, kiiskan waxaan ku siin doonaa sawirka midab cagaaran laakiin waxaad dooran kartaa midab kale.
Waxaan abuureynaa a dheelitirka midabka lakabka oo waxaan bilaabaynaa inaan bedelno qiyamka sawirka ilaa aan ka gaarno codka aan raadineyno, sawirka waxaan ku arki karnaa codka saxda ah ee loo adeegsaday kiiskan.
Waan awoodnaa weji caato ah yar ama muuji dhoola cadeynta si hel sawir cabsi leh adoo isticmaalaya miiraha dareeraha Photoshop. Haddii aad rabto inaad barato sida loo isticmaalo qalabkan waad arki kartaa tan kale boostada.
Waxaan hore u ognahay sida dib loogu kaydiyo sawir si loo helo a qaabka Zombie arrin xiiso leh tan Hallow. Xusuusnow in dhammaan aaladaha aan adeegsanay ay faa'iido badan u yeelan karaan noocyada kale sawir cusbooneysiin
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Sawirka qaabka Zombie oo lagu qurxiyo Adobe Photoshop
Kani waa boodhadhka cusub ee loogu talagalay Star Wars: Jedi Ugu Dambeeyay waxayna soo jeedineysaa inuu dhiig daadan doono
Sannadaha Diiwaangelinta Waddada Tareenka ee New York: Shaqada sawir qaade Andre D. Wagner